yaa baxaya yaase kusoo biiraya Chelsea? | Wardoon Wardoon.net - Somali News
yaa baxaya yaase kusoo biiraya Chelsea?
Macalinka Kooxda kubada Cagta Chelsea Antonio Conte ayaa soo bandhigay qorshihiisa ku aadan suuqa kala iibsiga Cayaartoyda Waxaana jira Xidigo uu doonayo in ay ka tegaan iyo kuwo uu doonayo in uu keeno Xili Cayaareedkaan.
Antonio Conte ayaa lasheegayaa in ay ka Go antahay in uu Kooxdiisa kadiro Cayaartoyda dalka Spain ee kala ah Diego Costa iyo Cesc Fabregas kuwaas oo aan kujirin qorshaha Xili Cayaareedka soo socda ee 2017-2018.
Sidoo kale Waxaa uu doonayaan in uu keensado badalka Cayaartoyda uu iska dirayo isaga oo xooga Saaraya helitaanka Romelu Lukaku, Marco Verratti iyo Dani Alves kuwaas oo uu dhamaantood kula jiro wadahadalo meel Wanaagsan maraya.
Cesc Fabregas ayaa kooxaha doonaya waxaa ugu horeeya Naadiga Macalinkiisii hore ee Manchester United Jose Mourinho iyo Kooxda dalka Talyaaniga ee AC Milan halka Diego Costa ay u badan tahay in uu aadi doono kooxaha lacagta badan ee Shiinaha.